Ann Morgan: ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်းက စာအုပ်တစ်အုပ်စီကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ နှစ် - English-Video.net
Ann Morgan - Writer, blogger, author
Ann Morgan | Speaker | TED.com
Ann Morgan: ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်းက စာအုပ်တစ်အုပ်စီကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ နှစ်
Ann Morgan သူမရဲ့ စာအုပ်စင်က "ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဧရာမ ဟာကွက်ကြီး"ကို သတိမထားမီ အချိန်အထိကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာတော်နှံ့နှံ့စပ်စပ် ဖတ်သူလို့ မှတ်ယူခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် စာရေးဆရာ အမြောက်အမြား အကြားတွင် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်တဲ့ စာရေးဆရာဆိုလို့ အင်မတန်ကို နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ရည်မှန်းချက် တစ်ခုချလိုက်တာက တစ်နှစ်တာလအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတိုင်းထံမှ စာအုပ်တစ်အုပ်စီကို ဖတ်ဖို့ပါ။ အခုတော့ သူမက အင်္ဂလိပ်စာကိုမှ ဖတ်ချင်လိုကြသူတွေကို ဘာသာပြန်လက်ရာတွေကိုဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေကာ စာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေကို နိုင်ငံခြား စာပေရတနာတွေကို ယူဆောင်လာဖို့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ စာဖတ်ခြင်း ခရီးစဉ်ရဲ့ တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ မြေပုံကို go.ted.com/readtheworld မှာ စူးစမ်းရှာဖွေလိုက်ပါ။
Ann Morgan challenged herself to readabook from every country in the world. Full bio
It's often said that you can tell
a lot aboutaperson
ပြောရိုးစကား တစ်ခုက လူတစ်ယောက် အကြောင်းကို
by looking at what's on their bookshelves.
ကျွန်မစာအုပ်စင်က ကျွန်မအကြောင်း ဘာပြောလဲ။
Well, when I asked myself
this questionafew years ago,
I made an alarming discovery.
I'd always thought of myself
asafairly cultured,
cosmopolitan sort of person.
But my bookshelves told
a rather different story.
ဒါပေမဲ့ စာအုပ်စင် ပြောနေတာက
Pretty much all the titles on them
were by British or North American authors,
အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် စာရေးဆရာတွေချည်းပါ။
and there was almost
nothing in translation.
ပြီးတော့ ဘာသာပြန်ထားတာလည်း မရှိသလောက်ပါပဲ။
Discovering this massive,
cultural blind spot in my reading
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဒီလို ဟာကွက်ကြီးဟာ
And when I thought about it,
it seemed likeareal shame.
ဒါကိုတွေးမိတော့ တကယ့် ရှက်စရာလိုပါပဲ။
I knew there had to be lots
of amazing stories out there
by writers working in languages
And it seemed really sad to think
that my reading habits meant
I would probably never encounter them.
တွေးမိတာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပုံရတာပေါ့။
So, I decided to prescribe myself
ဒါနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ စာဖတ်ခြင်း
an intensive course of global reading.
2012 was set to beavery
international year for the UK;
၂၀၁၂ ဟာ UK အတွက် အရမ်းနိုင်ငံတကာ
it was the year of the London Olympics.
လန်ဒန် အိုလံပစ် ကျင်းပတဲ့နှစ်ပေါ့။
And so I decided to use it
as my time frame
ဒီတော့ ဒါကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းက
ဝတ္ထုရှည်၊ ဝတ္ထုတိုစု (သို့)
to try to readanovel,
or memoir from every country in the world.
ဒါက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပြီး
and I learned some remarkable things
မှတ်သားလောက်တဲ့ အရာတွေကို လေ့လာမိကာ
and made some wonderful connections
ဒီနေ့ ရှင်တို့နဲ့ မျှဝေချင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့
that I want to share with you today.
But it started with some
ဒါပေမဲ့ တကယ့်ပြဿနာတွေနဲ့ စခဲ့တာပါ။
After I'd worked out which of the many
different lists of countries in the world
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ စာရင်းမျိုးစုံကို
to use for my project,
I ended up going with the list
of UN-recognized nations,
UN အသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံ စာရင်းနဲ့ပဲ
to which I added Taiwan,
which gave meatotal of 196 countries.
And after I'd worked out
how to fit reading and blogging
about, roughly, four booksaweek
အကြမ်းဖျင်း တစ်ပတ် အလုပ်လုပ်တဲ့ ငါးရက်မှာ
around working five daysaweek,
I then had to face up to the fact
that I might even not be able
to get books in English
Only around 4.5 percent
of the literary works published
နှစ်စဉ် UK မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ စာပေလက်ရာက
each year in the UK are translations,
၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဘာသာပြန် ဖြစ်ကြတာပါ။
and the figures are similar for much
Although, the proportion
of translated books published
အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေတဲ့
in many other countries isalot higher.
4.5 percent is tiny enough to start with,
၄.၅ % ဟာ စဖို့ေအတွက် နည်းလွန်းပါတယ်။
but what that figure doesn't tell you
ဒါပေမဲ့ ကိန်ဂဏန်းတွေက မပြောတာက
is that many of those books
will come from countries
with strong publishing networks
ကွန်ရက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကလာပြီး ကြေးစား
and lots of industry professionals
primed to go out and sell those titles
to English-language publishers.
So, for example, although well over 100
books are translated from French
ဥပမာဆိုပါတော့၊ နှစ်စဉ် စာအုပ်
၁၀၀ ကျော်ဟာ ပြင်သစ်ဘာသာကနေ
and published in the UK each year,
ဘာသာပြန်ပြီး UK မှာ ပုံနှိပ်ပေမဲ့
most of them will come from countries
like France or Switzerland.
အများစုဟာ ပြင်သစ်၊ ဆွစ်ဇာလန်က လာတာပါ။
French-speaking Africa, on the other hand,
တစ်ဖက်မှာ ပြင်သစ်စကားပြော အာဖရိက
will rarely ever getalook-in.
The upshot is that there are
actually quitealot of nations
ရလဒ်က တကယ်တမ်း အနည်းငယ်
that may have little or even no
commercially available literature
ဘာသာနဲ့ စာပေတွေ နိုင်ငံတော်ေတာ်
Their books remain invisible to readers
သူတို့စာအုပ်တွေကို ကမ္ဘာ့ ထုတ်ဝေမှု
of the world's most published language.
စာဖတ်သူတွေအတွက် မမြင်နိုင်ပဲ ရှိနေတယ်။
But when it came to reading the world,
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကို ဖတ်မယ်လို့ဖြစ်လာတော့
the biggest challenge of all for me
was that fact that I didn't
Having spent my life reading
almost exclusively British
တစ်သက်လုံး ဗြိတိသျှနဲ့ မြောက်အမေရိကန်
and North American books,
I had no idea how to go about
sourcing and finding stories
ဝတ္ထုတွေကို ဘယ်လို ဇာစ်မြစ်
and choosing them from much
ကျန်တဲ့ ကမ္ဘာကနေ ဘယ်လို များများ
I couldn't tell you how to source
a story from Swaziland.
ဘယ်လို ဇာစ်မြစ်လိုက်ဖို့ မပြောတတ်ဘူး။
I wouldn't knowagood novel from Namibia.
ဝတ္ထု ကောင်းတစ်အုပ်ကို သိမှာမဟုတ်ဘူး။
There was no hiding it --
ဒါက ပုန်းကွယ် ထားစရာမရှိဘူး။
I wasaclueless literary xenophobe.
ကျွန်မဟာ နလပိန်းတုံး နိုင်ငံခြား စာပေ
So how on earth was I
going to read the world?
ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကို
I was going to have to ask for help.
So in October 2011, I registered my blog,
ဒါနဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ မှာ ကျွန်မရဲ့
and I postedashort appeal online.
ကျွန်မ ဘယ်သူပါ၊ စာဖတ်တာဟာ
how narrow my reading had been,
and I asked anyone who cared to
ကမ္ဘာ့ အခြားနေရာက ဘာကို
to leaveamessage suggesting
from other parts of the planet.
Now, I had no idea whether
anyone would be interested,
of me posting that appeal online,
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ အွန်လိုင်းတင်ပြီး
people started to get in touch.
At first, it was friends and colleagues.
Then it was friends of friends.
ပြီး မိတ်ဆွေတွေရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ။
And pretty soon, it was strangers.
Four days after I put that appeal online,
တင်ပြီးလို့ ၄ ရက်အကြာမှာ
Kuala Lumpur က
I gotamessage fromawoman
called Rafidah in Kuala Lumpur.
the sound of my project,
သူမက ကျွန်မရဲ့ ပရောဂျက်ကို သဘောကျပြီး
could she go to her local
အနီးနားက အင်္ဂလိပ် စာအုပ်ဆိုင်သွားပြီး
and choose my Malaysian book
and post it to me?
I accepted enthusiastically,
a package arrived containing
not one, but two books --
ပါတာက ၁ အုပ် မဟုတ်ဘူး၊ ၂ အုပ်ပါ။
Rafidah's choice from Malaysia,
မလေးရှားက Rafidah ရဲ့ အကြိုက်နဲ့
andabook from Singapore
that she had also picked out for me.
စင်္ကာပူက ၁ အုပ်ပါ။
Now, at the time, I was amazed
ကဲ အဲဒီချိန်က အံ့သြမိတာက
thatastranger more than 6,000 miles away
တစ်ခါမှ တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့
would go to such lengths to help someone
မိုင် ၆၀၀၀ ကျော် အထိကြိုးပမ်း
she would probably never meet.
But Rafidah's kindness proved
to be the pattern for that year.
ဒါပေမဲ့ Rafidah ရဲ့ကြင်နာမှုက
အဲဒီနှစ်ရဲ့ နမူနာအဖြစ် သက်သေထူခဲ့တယ်။
Time and again, people went
out of their way to help me.
နောက်ထပ်ပြီးတော့ လူတွေဟာ ကျွန်မကို
Some took on research on my behalf,
and others made detours
on holidays and business trips
to go to bookshops for me.
It turns out, if you want
to read the world,
if you want to encounter it
ဒါကို ဖွင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရင်
the world will help you.
ကမ္ဘာကြီးက သင့်ကို ကူညီမှာပါ။
When it came to countries
with little or no commercially
available literature in English,
နည်းနည်းပဲ (သို့) စီပွားဖြစ်အနေနဲ့ မရှိတဲ့
people went further still.
Books often came from surprising sources.
My Panamanian read, for example,
came throughaconversation
ဥပမာ ကျွန်မရဲ့ ပနားမားဖတ်စရာက
Twitter မှာ ပနာမားတူးမြောင်းနဲ့
I had with the Panama Canal on Twitter.
Yes, the Panama Canal
And when I tweeted at it about my project,
it suggested that I might like to try
and get hold of the work
ဒါက ပနားမားသား စာရေးဆရာ
Juan David Morgan ရဲ့
of the Panamanian author
Juan David Morgan.
လက်ရာ စမ်းပြီးယူလောက်တယ်လို့ အကြံပေးတယ်။
I found Morgan's website
and I sent himamessage,
Morgan ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို တွေ့ပြီး
asking if any of his
သူ့ရဲ့ စပိန်ဝတ္ထုတွေကို အင်္ဂလိပ်လို
had been translated into English.
And he said that nothing
had been published,
but he did have an unpublished translation
ပုံနှိပ်မထားတဲ့ သူ့ဝတ္ထု The Golden Horse
of his novel "The Golden Horse."
He emailed this to me,
ဒါကို အီးလ်မေးလ် ပို့တယ်။
allowing me to become
one of the first people ever
ကျွန်မကို ဒီစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်လို
to read that book in English.
Morgan was by no means the only wordsmith
to share his work with me in this way.
From Sweden to Palau,
ဆွီဒင်ကနေ Palau အထိ
sent me self-published books
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ဘာသာထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့
and unpublished manuscripts of books
အင်္ဂလိပ် စကားပြော ထုတ်​ေဝသူတွေဆီက
that hadn't been picked
up by Anglophone publishers
or that were no longer available,
giving me privileged glimpses
of some remarkable imaginary worlds.
မှတ်သားစရာ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာတွေရဲ့
မြင်ကွင်းကို အထူးအခွင့် အရေးပေးရင်းပေါ့။
I read, for example,
about the Southern African king
Ngungunhane, who led the resistance
ရှင်ဘုရင် Ngungunhane အကြောင်း ဖတ်ရတယ်၊
၁၉ ရာစု ပေါ်တူဂီကို
and about marriage rituals
ပြီးတော့ Turkmenistan က Caspian
I met Kuwait's answer to Bridget Jones.
Bridget Jones ကိုဖြေတဲ့
ကူဝိတ်နိုင်ငံသားရဲ့ အဖြေကို တွေ့ခဲ့တယ်။
And I read about an orgy
inatree in Angola.
Angola က သစ်ပင်တစ်ပင်ထဲက
But perhaps the most amazing example
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကို ကမ္ဘာကြီးကိုဖတ်တာ
of the lengths that people
were prepared to go to
to help me read the world,
came towards the end of my quest,
ဥပမာက အဆုံးသတ်မှာ ရောက်လာခဲ့တယ်။
when I tried to get hold ofabook
from the tiny, Portuguese-speaking
São Tomé နဲ့ Príncipe ဆိုတဲ့
of São Tomé and Príncipe.
Now, having spent several months
trying everything I could think of to find
အခု အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ဆိုတဲ့
a book that had been translated
into English from the nation,
was to see if I could get something
translated for me from scratch.
ဒီအစကနေ ကျွန်မအတွက် ဘာသာ
Now, I was really dubious
whether anyone was going
to want to help with this,
တစ်ဦးဦးက​ ကူညီမလား၊ ဒါမျိုးအတွက်သူတို့ရဲ့
and give up their time
But, withinaweek of me putting
a call out on Twitter and Facebook
Twitter နဲ့ Facebook မှာ
for Portuguese speakers,
I had more people than I could
involve in the project,
including Margaret Jull Costa,
a leader in her field,
နိုဗယ်ဆုရှင် José Saramago ရဲ့ လက်ရာကို
who has translated the work
of Nobel Prize winner José Saramago.
ဘာသာပြန်တဲ့ Margaret Jull Costa
With my nine volunteers in place,
I managed to findabook
byaSão Toméan author
အွန်လိုင်းမှာ အလုံအလောက် အုပ်ရေ
that I could buy enough copies of online.
São Toméan ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်
ဒါက ဒီအထဲက တစ်အုပ်ပါ။
And I sentacopy out
to each of my volunteers.
They all took onacouple
of short stories from this collection,
ဒီစာစုကနေ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်စီယူကြပြီး
stuck to their word, sent
their translations back to me,
and within six weeks,
I had the entire book to read.
In that case, as I found so often
during my year of reading the world,
အဲဒီအဖြစ်မှာ မကြာခဏ တွေ့ရတာက
my not knowing and being open
about my limitations
ကျွန်မရဲ့ မသိခြင်းနဲ့ အားနည်းချက်တွေ
had becomeabig opportunity.
When it came to São Tomé and Príncipe,
São Tomé နဲ့ Príncipe ကိုရောက်တော့
it wasachance not only
ဒါဟာ အသစ်တစ်ခုကို သင်ယူတာ၊
and discoveranew collection of stories,
but also to bring together
လူစုတွေကို စုစည်းပြီး စပ်တူ ဆန်းသစ်တဲ့
and facilitateajoint creative endeavor.
My weakness had become
the project's strength.
The books I read that year
opened my eyes to many things.
အဲဒီနှစ်က ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေဟာ
As those who enjoy reading will know,
စာဖတ်တာကို နှစ်သက်သူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။
books have an extraordinary power
စာအုပ်တွေမှာ သင့်ကို သင့်ကိုယ်တိုင်ကနေ
and into someone else's mindset,
ခေါ်ထုတ်ဖို့ အံ့မခန်းတဲ့ စွမ်းအားရှိတယ်၊
အနည်းဆုံး ခဏလောက်တော့ လောကကြီးကို
That can be an uncomfortable experience,
particularly if you're readingabook
fromaculture that may have quite
different values to your own.
တော်တော် ကွာခြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုက
But it can also be really enlightening.
ဒါပေမဲ့ တကယ့် ဉာဏ်အလင်း
Wrestling with unfamiliar ideas
can help clarify your own thinking.
မရင်းနှီးတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ နပန်းလုံးတာဟာ
ကိုယ့်စိတ်ကူး ရှင်းလင်းဖို့ အကူရနိုင်တယ်။
And it can also show up blind spots
in the way you might have
been looking at the world.
When I looked back at much
of the English-language literature
ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်မကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့
I'd grown up with, for example,
I began to see how narrowalot of it was,
compared to the richness
And as the pages turned,
something else started to happen, too.
that long list of countries that
I'd started the year with, changed
ရှည်လျားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ စာရင်းနဲ့
ကျွန်မ စတင်လိုက်တဲ့ နှစ်ဟာ
fromarather dry, academic
register of place names
into living, breathing entities.
Now, I don't want to suggest
that it's at all possible
to getarounded picture ofacountry
simply by reading one book.
ပုံရိပ်ကိုရဖို့ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့
But cumulatively, the stories
I read that year
ဒါပေမဲ့ တစ်စစနဲ့ စုပေါင်းလိုက်တော့
အဲဒီနှစ်က ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတွေဟာ
made me more alive than ever before
ကြွယ်ဝမှု၊ ထွေပြား စုံလင်မှုကို
to the richness, diversity and complexity
of our remarkable planet.
It was as though the world's stories
ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ ဝတ္ထုတွေနဲ့ ဒါတွေကို
and the people who'd gone
to such lengths to help me read them
had made it real to me.
These days, when I look at my bookshelves
or consider the works on my e-reader,
(သို့) ကျွန်မရဲ့ e-reader က လက်ရာတွေကို
they tellarather different story.
It's the story of the power
books have to connect us
ဒါက နိုင်ငံရေး၊ ပထဝီ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊
လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကွဲပြားမှုတွေကို
across political, geographical,
cultural, social, religious divides.
ဖြတ်ကာ ကျွန်မတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့
စာအုပ်တွေမှာရှိတဲ့ အစွမ်း ဇာတ်လမ်းပါ။
It's the tale of the potential
human beings have to work together.
လူသားတွေမှာရှိတဲ စွမ်းပကား ပုံပြင်ပါ။
And, it's testament
to the extraordinary times we live
in, where, thanks to the Internet,
ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့ နေရာ၊ ထူးခြားတဲ့
ကာလတွေကို ဒါက သက်သေထူပါတယ်။
forastranger to shareastory,
a worldview,abook
with someone she may never meet,
I hope it'sastory I'm reading
ဒါဟာ နောင်နှစ်များစွာ ကျွန်မဖတ်နေမယ့်
ဝတ္ထု တစ်ပုဒ်လို့ ထင်ပါတယ်။
And I hope many more people will join me.
If we all read more widely,
there'd be more incentive
အားလုံး ပိုများများ ဖတ်ကြရင်
for publishers to translate more books,
and we would all be richer for that.
ဒီအတွက် အားလုံး ပိုကြွယ်ဝလာပါလိမ့်မယ်။
Ann Morgan: ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်းက စာအုပ်တစ်အုပ်စီကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ နှစ် | TED Talk | TED.com